Taariikhda My Butros » Sidee Muhiim ma Sex?
Last updated: Dec. 12 2019 | 2 min akhri
Mary iyo Ryan *(Magacyada la beddelay,) ahaayeen laba qof oo in badan oo saaxiibadood ka masayrtay. Waxay ahaayeen labada kulliyadda shaqooyinka weyn. Carruurta No weli. Laakiin sanaddii weyn ee ay biyaha ee deegaanka weyn iyo nawaaxigeeda. Waxay ahaayeen dhaqaale ahaan raaxo iyo jacayl. Qof kasta oo u maleeyey in ay ahaayeen sida ugu dhow ee aad iman karto si ay u “labo kaamil ah”.
Maxaa saaxiibo lammaanaha ee muu ogayn in in ay jirto qarsoodi ah in Mary iyo Ryan ayaa keenaya walaaca qaarkood in ay xiriir ah 4 sano. Ma aan heysan Waxay galmada.
Ryan Sheekada…”Dhab ahaantii waxaan ahay jacayl la Mary. Laakiin sababta kaliya ee sababta aan weli iyada oo aan weli guursan waxaa ugu wacan in aanan dareensanayn in aan dareen ama Zino iyada u galmada. Waxaan soo jiitay iyada, laakiin aan qaadan karto ama ka tagaan marka ay u galmoodaan. Waxaan kaliya, uma malaynayo in ay in weyn oo ah heshiis inkastoo. I”Waxay u badan tahay soo jeedin doonto ugu dhakhsaha badan.”
Sheekada Mary ee…”Waxaan galmo ku saabsan 4 goor sanadkii. Waxaan marnaba qof u sheegi lahaa in. Waan ogahay ma caadiga ah. Waxaan ula jeedaa Ryan waa ku weyn yahay siyaabo badan oo kale – Anigu u malayn maayo in ay wayn noo saameyn doono. Laakiin mararka qaarkood waxaan ha la Yaabteen – waa igu? Mise isaga waa?”
Rumayso ama ha rumaysan – waxaa jira lamaane badan sida Ryan iyo Mary ayaa la aan lahayn jinsi si joogto ah ama ay ku qanceen labada dhinacba. Badankoodu qiil waxba kama qabanayaan sababtoo ah ma u malayn in jinsi waa in la qeexo xiriirka. Dadka intooda badan aysan diyaar u ah inay joojiyaan xiriir ku salaysan chemistry xun ama isgaarsiinta xun. Ma doonaysaa inaad?
Haddii sheekadan u muuqataa sidii aad noloshaada — waxaa jira waxyaabo aad u baahan tahay si ay u eegaan…
1. Aad ku nooshahay laga yaabaa in inta ka hartay noloshaada aan Shukaansiga galmada oo joogto ah?
2. Sidee muhiim ah waa galmo aad si? Sidee muhiim ah ayaa waxa ay had iyo jeer ahaa?
3. Ma dareentaa galmo in uu yahay qayb muhiim ah oo ku saabsan guur ama mudada dheer xiriir?
4. Ma u samaysay hubiyo in ma jiro wax jidh ahaan ama hormonally qaldan qof idinka mid ah?
5. Hayso qof idinka mid ah soo maray nooc kasta oo trauma galmada?
6. Ka warrama haddaan la hadlaya therapist galmo ah ama xirfadle kale oo ku saabsan nolosha galmada?
Aragtidayda, Galmadu waa qayb aad u muhiim ah waqti dheer ah- xiriirka dheer. La'aanteed – waxaa waa ka madhan yahay in dadka ka buuxsami doona xiriirada kale, cunto, khamaarka, khamriga ama galmo nooc kale ah (sites lulataaye internet ama shukaansi), iwm.
More – Galmadu waa badan oo xiiso leh oo si fiican xiiso leh! Ha seegin hana ka soo baxay oo ku saabsan waxa qayb ka noqon kartaa runtii abaal aad xiriir. Haddii aadan xiriiri kartaa oo ku saabsan noloshaada galmo la lammaanahaaga – markaas aad qabto muddo burburka isgaarsiinta guud. Waxaa ugu dambayntii soo galayo doonaa meelaha kale ee nolosha. Raadi gargaar aad u baahan tahay hadda ama haddii aadan aad u weyn loola weli maal- – waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad damaanad ka baxay inta aad awooddo.
Gunaanad…Ryan iyo Mary ma danbeyn guursado iyo galmootay yar ku sugan xeebta ah. Taasi ma haboon fikrad Mary ee dáda toddobobax ah, si ay u naxday iyo Ryan siiyey danbays ah. Therapy ama baabi'in. Waxay yeeleen siin therapy tijaabinin laakiin Ryan ogaaday in aysan jirin ahaa wax badan in ay ka shaqeeyaan. Ma ahayn kaliya dareen xoog ku filan oo ku saabsan galmada ama galmo la Mary. Ma hubo. Nasiib darro Ryan iyo Mary kala waxaana haatan ay kawada hadlayaan furiinka.